Ny ronono sy ranom-boankazo aorian'ny homogenisasi homogenizer avo lenta dia manana tombony betsaka: manatsara ny kalitaon'ny fitehirizana sy ny fitehirizana, manafaingana ny fotoana fihetsehana, mamonjy additives; ampiasaina amin'ny sakafo, zava-pisotro, kosmetika ary saha hafa.
Fisotroana ronono, ronono, yaorta, ronono soja, sns;
4. Fanindriana: 20Mpa;
1. Ny masinina manontolo dia rakotra akorandriaka vy tsy misy fangarony, miaraka amin'ny endriny mamirapiratra, madio sy marefo, azo antoka ary madio ara-pahasalamana.
2, Mampiasà fitaovam-piadiana helika amin'ny fifindran'ny hafainganam-pandeha ambany, tabataba ambany, fandidiana azo antoka ary fampisehoana azo antoka.
3. Ny ampahany fandefasana dia mampiasa karazana splashing sy fomba famahanana menaka tokana mba hiantohana ny fanosorana ny faritra tsirairay.
4. Ny famolavolana seza misy valiny roa amin'ny seza valizy dia afaka manalava ny fiainana serivisy indray mandeha.
5, valizy homogène, valizy fanaraha-maso, plunger vita amin'ny vy vita amin'ny firaka, miaraka amin'ny fanoherana ny fitafiana, fanoherana ny fiantraikany, androm-piainana maharitra ary toetra hafa.
6. Ny vokatra voadinika dia tsara sy mitovy, matetika ambanin'ny 1 ~ 2um.
7. Ireo vokatra voahodina dia manana fitoniana tsara sy fiainana maharitra.
8. Ny sakafo voadio sy ny zava-mahadomelina dia afaka manatsara ny habetsahan'ny fidirana. Arakaraka ny maha-tsara kokoa ny haben'ny poti-tsakafo no mora entin'ny vatan'olombelona.
9, ny fitaovana dia azo zahana hanatsarana ny viscosity sy ny concentré. (Ohatra, ny fatran'ny ronono soja dia nitombo taorian'ny fitsaboana, ary nitombo ny volan'ny gilasy ary nitombo ny viscosity taorian'ny fitsaboana, izay tsy afaka mamonjy fitaovana fotsiny , fa koa ampitombo ny isan'ny vokatra).
/ T / h）
Teo aloha: Colloid Mill
Manaraka: Milina fanasana lamba